US/16A (3.6KW) Soo -saarayaasha & Alaab -qeybiyeyaasha | Shiinaha US/16A (3.6KW) Warshadda
SAE J1772 Baabuurka Baabuurka Korantada Baabuurka 32A oo wata Shahaadada ETL
OEM Supply China Charger EV, Charger Car Electric oo leh LCD, Shirkadeena waxay dejisaa dhowr waaxood, oo ay ku jiraan waaxda wax soo saarka, waaxda iibka, waaxda xakamaynta tayada iyo xarunta sevice, iwm. kaliya si loo dhammaystiro badeecada tayada wanaagsan leh si loo daboolo baahida macaamilka, dhammaan xalalkayaga ayaa si adag loo baaray kahor shixnadda. Waxaan had iyo jeer ka fikirnaa su'aasha dhinaca macaamiisha, maxaa yeelay waad guuleysataa, waan guuleysannaa!
Iibinta kulul ee Shiinaha SAE J1772 EV Re Station Station oo leh Nooca 1 Cable
Iibinta kulul ee Shiinaha SAE J1772, Saldhigga Dib -u -soo -celinta, Tayo aad u fiican ayaa ka timaadda u hoggaansanaanta faahfaahin kasta, qanacsanaanta macaamilkuna waxay ka timaaddaa daacadnimadayada daacadnimada leh. Ku tiirsanaanta tikniyoolajiyadda horumarsan iyo sumcadda warshadaha ee iskaashiga wanaagsan, waxaan isku daynaa sida ugu wanaagsan ee aan u siin karno badeecado tayo leh iyo adeegyo macaamiisheena, dhammaanteenna waxaan diyaar u nahay inaan xoojinno is -weydaarsiga macaamiisha gudaha iyo dibaddaba iyo iskaashiga daacadnimada ah, si loo dhiso mustaqbal wanaagsan.
Level2 5meter 16A Type 1 EV Charger for Cable Charging Vehicle Electric
Qiimaha jaban ee China EV Charger, Cable Charging Vehicle Electric, Waxaan siin karnaa macaamiisheenna faa'iidooyin dhammaystiran oo ku saabsan tayada badeecadda iyo xakamaynta qiimaha, haddana waxaan leenahay qaabab buuxa oo ka samaysan ilaa boqol warshadood. Maaddaama badeecaddu si dhakhso leh u cusbooneysiineyso, waxaan ku guuleysaneynaa inaan u horumarinno badeecooyin badan oo tayo sare leh macaamiisheena oo aan u helno sumcad sare.
Heerka 2 Qaybta Bixiyaha EV oo leh Nooca 1 Outlet 16A 3.5kw
Waxaan ku taageernaa macaamiisheena badeecooyin tayo sare leh iyo adeegyo heer sare ah. Noqoshada soo -saaraha takhasuska leh ee qaybtan, waxaan hadda helnay waayo -aragnimo shaqo oo barwaaqo leh oo soo -saaris iyo maareyn ah oo loogu talagalay OEM Supply China 16A SAEJ1772 Unugga Ka -qaadista Baabuurka Korontada oo leh Nooca 1 Cable, Waxaan ilaalinnaa jadwalka bixinta waqtiga, naqshadaha hal -abuurka leh, tayada sare iyo daahfurnaanta iibsadayaasha. Baabuurkeenu waa inuu noqdaa mid aan ku bixinno alaab tayo leh waqtiga la cayimay.